Sedan (Standard) | Starting from $22,999 - Sedan (High Grade) | Starting from $27,999
Compact Sedan & Hatchback | Starting from $46,999
Executive Sedan | Starting from $57,999
Crossover SUV | Starting from $ 46,999
Compact SUV | Starting from $57,999
Full-Size Crossover SUV | Starting from $84,999
Extra Cab | Starting from $26,000
Cycle & Carriage distributes, retails and provides aftersales services for passenger cars as well as commercial vehicles in Singapore, Malaysia and Myanmar.
The very 1st Euphonos Roadster has release on September 1989
Mazda ရဲ့ Trade-in Promotion စပါပြီ
ကားကို Trade-In ပြုလုပ်ခြင်း ကြောင့်ရနိုင်သော ကောင်းကျိုးများ
ကားသစ်တစ်စီးကို မဝယ်ခင် ဘာကြောင့် Test Drive မောင်းနှင်သင့်တာလဲ?
KODO ဝိညာဉ်တွေစီးဝင်နေတဲ့ Mazda CX-5 ( The Next Generation)
လမ်းမတွေပေါ်မှာပြေးလွှားနေကြတဲ့ Mazda နောက်ထွက်မော်ဒယ်ကားလေးတွေကို မြင်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းနဲ့ ကိုယ်ထည် အချိုးအဆစ်တွေက တစ်မူထူးခြားနေသလို သူတိုရဲ့ Trade Mark အရောင်ဖြစ်တဲ့အနီရောင် (Soul Red Crystal Metallic)
Hiroshima by Hand
For centuries, Mazda’s home town of Hiroshima has beenacentre for craftsmen. Expertise is passed from generation to generation to produce talented Takumi (craftsmen) like 84-year-old swordsmith Tatsuo Koshimizu, expert brush-maker Shirõ Takeda, third-generation Takamori-e lacquer master Kinjo Ikkokusai, and traditional Japanese musical instrument maker Kenzõ Ogawa. And Mazda gladly keeps this tradition alive with expert takumi part of its vital DNA…
Mazda 3S ရန်ကုန် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
Cycle & Carriage Myanmar ၏ Mazda 3S အရောင်းပြခန်း အသစ်ကို ၂၀၁၉ မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၅၁)၊ ပြည်လမ်း (၇)မိုင်ခွဲ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၌ ပြောင်းရွေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ (၁၁,၄၀၆) စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းသော Mazda 3S အရောင်းပြခန်းအသစ်တွင် ကား(၆)စီး ပြသနိုင်သည့်အရောင်းပြခန်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသည့် After Sales ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန် နေရာ (Work Bay) (၅)ခုတို့ ပါဝင်ပါသည်။
Showroom & Service Center Reopening
Mazda Showrooms and Service Centers in Yangon and Mandalay are now opening daily from 9:00am to 3:00pm
MAZDA ကားချစ်သူများအတွက် သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ကား အမှတ်တံဆိပ်များစွာထဲကမှ MAZDA ကား Brand သည် Consumer Reports 2020 Auto Reliability Survey မှာ ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး နံပါတ် (1) ကား Brand အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ Japanese Premium Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MAZDA ကားကိုပိုင်ဆိုင်ရင်း ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာမောင်းနှင်ဖို့ ဒီနေ့ပဲ Mazda ကားတွေကို လာရောက် Test Drive လုပ်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။
YANGON: No. 51, Pyay Road,7½ Miles, Mayangone Township
09 897 837 897 - 01 967 0286
MANDALAY: No. 10(A), The corner of 77th & 35th Street, Mahar Aung Myay Township
09 456 1111 04 - 09 465 1111 05